SUBSAHANA AFRICA: WAXQABADKA DIB UGU DAMBEEYEY (AFRICA PULSE)
ACCUEIL » DHAQAALAHA SUB-SAHARAN AFRICA: KA DIB MARKII LAGA YAABO BADBAADADA (AFRICA PULSE)
SUB-SAHARAN AFRICA: KA DIB MARKII LAGA YAABO BADBAADADA (AFRICA PULSE)
Dib ee koritaanka in Sub-Sahara Africa ku hadhay jilicsan sannadihii la soo dhaafay ka dib markii dhibaatada ugu xumaa dhaqaale ee labaatankii sano ee la soo dhaafay, APS bartay.
Kormeerkan waxaa lagu sameeyay wargeyska 19e ee warbixinta Pulse Afrika, oo loo soo bandhigay Isniintii. Qoraalka waxa si gaar ah sheegtay in a in GDP ee 2018, hoos loo eegay, si 2,3% ka hor inta yar kubadii ah 2019 in 2,8%.
Warbixinta Afrika ee Pulse, oo ay soo saartay Xafiiska Madaxa-dhaqaalaha ee Bankiga Dhexe ee Afrika, ayaa soo bandhigeysa aragtida mustaqbalka fog ee mustaqbalka qaaradda ee qaarada Afrika.
Waxaa la daabacaa bisha Oktoobar iyo Abriil, inta lagu guda jiro Shirarka Sanadlaha ah iyo Kulannada Booqashada Kooxda Bangiga Adduunka iyo Sanduuqa Caalamiga ah ee Lacagta.
Sida laga soo xigtay hadal uu helay at APS ah, '' warbixinta ay muujineysaa doorka muhiimka ah ee saddexda dhaqaalaha ugu badan ee qaaradda, Nigeria, Angola iyo South Africa, firfircoonida iyo dhaqaale ee gobolka ''.
In Nigeria, koritaanka ayaa dhab ahaan degdegsiimada badan 2018 2017, mahad yar kabashada ah qaybta aan saliidda, balse ka hooseeya 2%.
Angola ayaa weli ku jira hoos u dhac, iyada oo wax soo saarka saliida daciif ah uu si xoog ah u yareeyay koritaanka.
Koonfur Afrika ka soo dhicii ee quarter saddexaad ee 2018, ogyahay koritaanka suubban oo keliya, iyada oo aan la hubin siyaasadeed oo miisaankeedu yahay on kalsooni Maal, isha ayuu yiri.
Inta kale ee qaaradda, waxqabadka 2018 waa isku dhafan yahay.
Warbixinta ayaa sidoo kale sheegay in wadamada khayraadka-hodanka ah ayaa ka faa'iideystey kabashada in qiimaha badeecadda iyo wax soo saarka macdanta, iyo kororka wax soo saarka beeraha iyo maalgashiga guud ee kaabayaasha loo baahan yahay in la keeno alaabta macaamilka iyo suuqyada.
Wadamada Beesha Dhexe ee Dhaqaalaha iyo Ganacsiga Bartamaha, ayaa dib-u-habaynta lagu bilaabay ayaa bilaabay inuu midho dhasho, inkasta oo dadaallada u muuqda inay joogsadaan xaaladaha qaarkood.
Warbixintu waxay xustey in kaydadka '' yar ku tiirsan yihiin kheyraadka dabiiciga ah, sida Kenya, Uganda iyo Rwanda oo dhowr waddan oo ka mid ah Midowga Dhaqaalaha iyo Lacagta ee West Africa, oo ay ku jiraan Benin iyo Ivory Coast posted waxqabadka xooggan ee 2018 ''.
Warqadda ayaa sidoo kale muujineysa laba arrimood oo "sii wadaan kor u qaadista koritaanka gobolka: deyn iyo jilicsanaanta".
Waxa uu carrabka ku adkeeyay in ka badan kordhinta deynta, "dhibaatadu waxay la xiriirtaa dabeecadaha deynta iyo dayacmoodka uu keeno".
Sida ku cad warbixinta, '' dalalka soo jeestay ilaa waagaas ilaha dhaqanka concessional oo damaanad qaaday gobolka si ay u maal ay deynta dibadda sii kordheysa iyadoo la isticmaalayo lacagaha gaarka, qaali ah oo ku tiirsan tahay suuqa, taas oo ay xoojiso khatarta ''.
Qoraalka waxa baaqaday in 2018 dhamaadka, '' ku dhowaad nus ka mid ah dalalka ka hooseeya Sahara ee Afrika daboolo qaabka guud ee jiritaanka deynta (a) dalalka dakhligoodu hooseeyo ay halis ugu jiraan cidhiidhi deynta xitaa in deynta halis ah, tiro in ay laba-laab marka loo eego 2013 ''.
Warbixinta ayaa sidoo kale eegaysa rajada Afrika ee ka hooseysa saxaaraha Sahar, iyagoo tilmaamaya caqabadaha ku jira kacaanka digital.
source: http: //www.aps.sn/actualites/economie/article/rapport-bm-sur-l-afrique-subsaharienne-une-croissance-bloquee-sous-les-3-depuis-2015
Isku-shaandhaynta Senegal: Mouhammadou Makhtar Cissé, oo ka soo jeeda Senelec ilaa Wasaaradda Saliida - JeuneAfrique.com
Inkasta oo dhibaatooyinka CDC, xayawaannada muuska Cameroon ay soo dhoofiyaan 3 817 tan saddexaad ee hore ee 2019